I-iPhone X ayizukufika yodwa kwaye i-Apple Watch Series 3 iya kuba yinyani ngomso | Iindaba zeGajethi
I-iPhone X ayizukufika yodwa kwaye iApple Watch Series 3 iya kuba yinyani ngomso
Kwiiyure ezimbalwa emva kwe-Keynote ka-Apple, apho i-iPhone entsha iza kuboniswa khona, sele ivuza kwaye sele iqalile ukujikeleza kwinethiwekhi yenethiwekhi. Inguqulelo yeGolden Master ye-iOS 11 entsha. Inguqulelo yokugqibela yenkqubo entsha yokusebenza kuka-Apple ibijikeleze ixesha elincinci kakhulu kuba abo baseCupertino bayeke ukuyisayina ngokukhawuleza, kodwa kuye kwanceda ukufunda isixa esikhulu solwazi olunomdla.
Enye yazo kukuba i-iPhone X ayizukufika yodwa, kwaye iya kukhatshwa ngu Uthotho lwee-Apple Watch 3, Esicinga ukuba iya kuba nezinto ezininzi ezintsha ezinokusinika zona. Into ebonakala ngathi ingumbulelo oqinisekileyo kukuvuza kukuba siza kubona umbala omtsha obizwa ngokuba yi "Blush Gold" yeewotshi zemidlalo yealuminium kunye entsha ebizwa ngokuba yi "Ceramic Grey" yohlelo lweApple Watch.
Olu lwazi lukhutshwe kwikhowudi ye-iOS 11, nangona kunjalo ayisosiqinisekiso sokuba iApple izakubeka iApple Watch Series 3 kwintengiso ngomso ngemibala emitsha.
Ngokubhekisele kwinto entsha esinokuyinikwa yiwotshi entsha yeApple, kuya kubakho izinzwa zebhayometri ezinokuthi zidityaniswe nesicelo sezeMpilo, utshintsho oluncinci kuyilo, kwaye ngokuqinisekileyo ezinye izinto ezintsha esiza kuzibona ngomso eSteve Jobs Ithiyetha, apho kulindeleke khona umsitho we-Apple apho sele iqinisekisiwe ukuba asizukubona i-iPhone entsha kuphela, kodwa nesinye isixhobo.
Ngaba ucinga ukuba siza kubona iApple Watch Series 3 entsha njengoko ikhowudi ye-iOS 11 evuzayo ibonisa?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » I-iPhone X ayizukufika yodwa kwaye iApple Watch Series 3 iya kuba yinyani ngomso
Kutyhilwe ukuba ingakanani i-RAM eya kuba nayo i-iPhone 8, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone X
Inokuba yeyiphi imingxunya yesibini emnyama emikhulu kwiMilky Way eyafunyanwa ngothuko